Posted by တန်ခူး at 1:18 PM
I can feel your warm sisterhood. You are so lucky becoz you have such talented and generous younger sister.
Is she still single? :)
အမ ညီမလေးက တကယ်တော်တာပဲ...
အမတန်ခူးရေ အမကြီးရဲ့မေတ္တာတွေခြုံလို့ လုံနေတဲ့ ညီမငယ်တစ်ယောက် မောင်ငယ်တစ်ယောက်ဘ၀ကို အားကျမက်မောစွာ ဖတ်သွားမိပါတယ်...
စိတ်ထားကောင်းပြီး လူတန်းစားမရွေး ကူညီကုသပေးတတ်တဲ့ ဆရာဝန်မလေးရဲ့ မွေးနေ့ကိုလည်း ဒီထက်အောင်မြင်ပြီး အများအကျိုးကိုသယ်ပိုးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ထုံလွှမ်းနေတဲ့ မွေးနေ့ မှာ
ကောင်းခြင်း အဖုံဖုံ ပြည့်စုံပါစေလို့
ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ စိတ်ကောင်းတဲ့ အစ်မတန်ခူး ညီမလေးး)
ကိုယ့်မှာက ညီအမ မရှိတော့ ညီမလေးတွေ အမတွေ ရှိတဲ့သူတွေကို အဖေါ်ရတယ် ဆိုပြီး သဘောကျတယ်...
တန်ခူး ညီမလေးရဲ့ ချစ်စရာ မွေးနေ့လေးမှသည် နောင်နှစ်ပေါင်း များစွာတိုင် ကိုယ့်မိဘနှစ်ပါးနဲ့ မိသားစုအကျိုး၊ တိုင်းပြည် အကျိုး အများအကျိုးကို သယ်ပိုးနိုင်သူတယောက် ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
တန်ခူးညီမလေးဆိုတော့ ကိုယ်တို့သူငယ်ချင်း တန်ခူးလိုပဲ ချစ်စရာလေးနေမှာ ... မျက်စိထဲမှာ .မြင်ယောင်မိပါတယ် ...
စေတနာကောင်းတဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက်ရှိတဲ့ တန်ခူးအတွက်ရော၊ ညီမလေးအတွက်ပါ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ အားလဲကျမိပါတယ်။
မွေးနေ့မှသည် ကောင်းရာကောင်းကျိုးတွေ ဆထက်ထမ်းပိုး တိုးလို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ။
စာဖတ်နေရင်းနဲ့ မတန်ခူးတို့ မိသားစုရဲ့ ဖြူစင်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ အေးချမ်း သာယာမူက ဖတ်နေသူကိုပါ လာရောက် ကူးစက်သွားပါတယ်။ ဒေါက်တာမနောဖြူဝင်းရဲ့ စေတနာမေတ္တာကိုလည်း ချီးကျူးမိပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ ဒေါက်တာရေ..။ လိုအပ်နေတဲ့ လူနာတွေကိုလည်း ဒီထက်ပိုပြီး ဆေးကုပေးနိုင်ပါစေ။
ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့ မတန်ခူးညီမလေးအတွက် ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့ပါ။
အကြီးတွေရဲ့ စေတနာ မေတ္တာကတော့ ကြီးမားလှပါတယ်။
ပထမဆုံးကွန်မန့်က မေးခွန်းကို စိတ်ဝင်စားတယ်... အဟဲ.... စတာနော်.. :P
အမတန်ခူး အမေ ပျိုးခဲ့တဲ့ ပန်းလေး ထင်တယ်။ ရေခံ မြေခံကောင်းလို့ ပန်းကလေးက တင့်တယ်လှပတယ်။ ရေလောင်းတဲ့ ဥယျာဉ်မှူးနဲ့ ပေါင်းသင်တဲ့ မမ နဲ့။
ပန်းကလေး မနောဖြူဝင်း တယောက် ဘ၀မှာ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်မှုတွေ ဒိထက်မက ပိုင်ဆိုင် ကျေနပ်ရအုံးမှာပါလေ။
အင်္ကျီ ဒီဇိုင်းတွေ ဆွဲတတ်တဲ့ အမမျိုး လိုချင်လိုက်တာ... ဒေါက်တာ မနောဖြူဝင်းကို Happy Birthday ပါလို့။
တန်ခူးညီမလေး စေတနာ ဆရာဝန်မလေးးးး
စိတ်ထားသဘောကောင်း ကြင်ယာတော်နဲ့ အမြန်ဆုံပါစေ..ဟိဟိ
သိပ်တော်တဲ့ ညီမနဲ့ အရမ်းချစ်တဲ့ အမ..
ဖတ်ရတာ ဝမ်းသာစရာကောင်းလိုက်တာ အမရေ..
မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်များစွာထိ.. ပျော်ရွှင်အောင်မြင်ပါစေ...
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ။ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် အများအကျိုးသယ်ပိုးနိုင်ပါစေနော်။
အမတန်ခူးရေ အမစာထဲမှာ ညီမလေးကို ချစ်တဲ့အချစ်တွေ မြင်နေရတယ်။ အားကျမိပါတယ်။
နာမည်လေးနဲ့ လူနဲ့လိုက်တဲ့ ဆရာဝန်မ လှလှလေး မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေလို့
မတန်ခူး ညီမလေး ဘဝတလျှောက်လုံး ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ ပြီး မိမိအကျိုး အများအကျိုး ဆထက်တပိုး ရွက်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့ . . .
ဧပြီလက အမ အတွက် ရင်ခုန်ရဆုံးလ လားဟင် ??
ညီမလေးအပေါ်ထားတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို နားလည်ခံစားသွားပါတယ်
တန်ခူးရဲ့ အကြီးဆန်တဲ့ စိတ်လေးရယ်.. ဆယ်နှစ်တောင်ခြားတဲ့ ညီအမနှစ်ယောက်ကြားက ချစ်ခြင်းသံယောဇဉ်ရယ်..ပန်းပျိုးတဲ့ မေမေလက်ထွက် လှပမွှေးကြိုင်တဲ့ ပန်းကလေးနှစ်ပွင့်အကြောင်းဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာကောင်းလိုက်ပါဘိ တန်ခူးရယ်..။
တန်ခူးရဲ့ ညီမလေး မနောဖြူဝင်းရဲ့ မွေးနေ့မှသည် ဘ၀တစ်သက်တာလုံး မေတ္တာလွှမ်းတဲ့ ပန်းများကြားမှာ ပျော်မွေ့ချမ်းမြေ့နေနိုင်ပါစေနော်..။
Tag ထားတယ် အစ်မရေ ။
ချစ်ခြင်းတရားက အင်မတန်သိမ်မွေ့ သလို လေးနက်လွန်းပါတယ်...
မောင်နှမတွေကြားက ချစ်ခြင်းကလဲ လှပလွန်းပါတယ်။
မျှဝေသူနဲ့ လက်ခံသူ ထပ်တူကျနေပါတယ်..။
ညီမလေးရဲ့ မွေးနေ့ပျော်စရာလေးဖြစ်ပါစေ။
ဟုတ်ပါတယ် Waiရေ… သူ့ အတွက် သိပ်မပူပင်ရတာမို့ဒီလို ညီမလေးရတာ ကံကောင်းပါတယ်… ကျွန်မတို့မောင်နှမ ၃ ယောက်မှာ ကျွန်မတယောက်ထဲ အိမ်ထောင်ကျသေးပါတယ်… ကြော်ငြာတာ မဟုတ်ဘူးနော်… ခုလို လာလည်တာ ကျေးဇူးပါ… နောင်လဲ လာလည်ပါဦးနော်…
ကျေးဇူးပါ ညီမလေးနွေးနေခြည်ရေ… သူ့ ကို ပြောပြလိုက်မယ်နော်… နောင်လဲ လာခဲ့ပါဦးညီမရေ….
ရွာသားလေးရေ… ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်… ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ…
ကျေးဇူးပါ မမသီတာရေ… ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ…
ဆုတောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ မောင်မျိုးရေ…
သက်ဝေရေ… တို့ တွေညီမက သက်ဝေညီမပဲပေ့ါနော်… ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ…
ဆွိရေ… တို့ ကပိုချောတယ်တဲ့… လူတွေက ပြောကြတယ်… သူကြားရင် နှုတ်ခမ်းစူနေဦးမှာ…
ဆုတောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါညီမရီတာရေ… ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ…
ကျေးဇူးပါ ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်ရေ… ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ…
ကိုပီတိကတော့ လုပ်ပြီ… ထီလဲထိုးထားတယ်လဲ ပြောသေး… ပထမဆုံးကော်မန့် ကို ဖြေပြီးပြီလေ…
ဟုတ်ပါတယ်ချိုသင်းရေ… မေမေ့ပန်းကလေးတပွင့်ပေါ့… မေမေပင်ပန်းမှာ စိုးလို့တို့ လဲကူညီ ရေလောင်းပေါင်းသင်ခဲ့တာပါ… ကျေးဇူးပါညီမရေ…
ညီမမီယာရေ… ခုရပြီလေ… ဘလော့ဂ်ပေါ်က အမပေါ့…ကဲ… ဘာပုံလေးချူပ်ချင်တာလဲပြော…တို့ ဒီဇိုင်းတွေ ကြိုက်ပါ့မလားတော့မသိ…
မမရေ… ကျွန်မအဖေသာ မမရဲ့ ဆုတောင်းကိုတွေ့ ရင် ပေးတဲ့ဆုနဲ့ မပြည့်ပါစေနဲ့ လို့ပြောမှာသိလား… ဖေဖေက ကျွန်မတို့မောင်နှမတွေကို အိမ်ထောင်မပြုစေချင်ဘူးလေ…
ကျေးဇူးပါ ကိုဇနိရေ… ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ…
နိနိရေ… ကျေးဇူးပါညီမရေ… ညီမလေးတယောက်ထဲလဲဖြစ် အထွေးဆုံးဆိုတော့ အတော်ချစ်တယ် နိနိရေ… ဆုတောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ…
မြတ်နိုးရေ… မနောဖြူဝင်းက မေမေပေးတဲ့ အိမ်နာမည်လေးပါ… သူ့ နာမည်အရင်း မဟုတ်ပါဘူး… အမရော သူပါ အဲဒီနာမည်လေးကို သိပ်ချစ်တာ… ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေညီမရေ…
ကျေးဇူးပါ မမကြီးပေါက်ပေါက် (သူ့ အစားပြောလိုက်တာ ပေါက်ရေ)…
ဆုတောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ညီမရွှေခိုင်ရေ… သိပ်မှန်တာပဲညီမရယ်… ဧပရယ်က အမအတွက် ရင်ခုန်ရဆုံး… အမှတ်တရတွေ အများဆုံးလပါ…
ကျေးဇူးပါပန်ရေ… အကြီးတွေတိုင်းမှာ ဒီလို ခံစားမှုလေးတွေ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်…
မ ရေ… အပြင်မှာ သူတို့ ကို သူငယ်ချင်းလို ပေါင်းလို့သိပ်တော့ မလေးဘူး မ ရေ… သူတို့ ရှိန်နေမှာ စိုးလို့ကျွန်မက သူငယ်ချင်းလိုပဲ ပေါင်းပါတယ်… ညီမလေးက အားကိုးဖော် တိုင်ပင်ဖော်ပါ မ ရယ်… ဆုတောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါနော်…
မောင်မျိုးရေ… ရေးပြီးပြီနော်… ကျေးဇူးပါ…
ကိုသစ်နက်ဆူးရေ… ဖတ်သူကို ကြည်နူးစေတယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာရပါတယ်… ဆုတောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ…